ikhaya IOORANIA FOOTBALL STORI I-Aaron Mooy Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Igqityelwe ukuvuselelwa kwi Aprili 12, 2020
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Midfield Genius owaziwa kakhulu ngeSiza; "INtloko ekhuselekile". Indaba yethu ye-Aaron Mooy yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa komntwana. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye nezinto ezininzi ezingaziwa malunga naye.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nobuchule bakhe bobunkokheli obuhamba phambili kodwa abambalwa bacinga ukuba u-Aaron Mooy yi-Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Aaron Mooy Iindaba zebantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
UAron Frank Mooy wazalelwa ngomhla we-15th kaSeptemba eSydney, e-Australia. Emva kokuzalwa, waqanjwa ngokuthi nguAaron Kuhlman kwaye akayi-Aaron Mooy. Umama wakhe waseDatshi utshintshe igama lakhe xa ehlukana noyise xa uMooy wayemncinci. Enyanisweni, uMooy wayembona uyise nje kanye - kwaye emva koko wayemncinci nje xa ebengumncinci.
Umntwana onamahloni, onobuhlungu obomvu obomvu wathandana nebhola kwaye abazali bakhe banamdla. Emva koko, wayelumlutha wokubukela ibhola ye-Australia yasebusuku (i-Premier League) kwiTV kunye nokugubha. UMooy wayeya kwiimarike aze afumane ijezi ze-Manchester United Premier League. UDavid Beckham wayeyithandayo, nanini na xa wayeseTV u-Aaron uya kufuneka abukele. Emva kokubukela u-Beckham, uya kuqhuba ukukhawuleza kwakhe kunye nokuzenza ngathi nguye.
Njengokuba ibhola liba yingxenye enkulu yobomi bakhe buntwaneni, uAron akazange akwazi ukuyeka ukucinga ukuba ngumdlali webhola. Wajoyina i-New South Wales Institute of Sport (NSWIS), e-Sydney Olympic Park ukuqala umsebenzi wakhe wobutsha.
UMooy walandela indlela eqhutywe kakuhle yabaninzi bebhola kwaye wayiphakamisa ubomi bakhe esemncinci ukulandela amaphupha akhe. Washiya i-Australia ebudeni be-15 kunye nokusila kwelanga kunye nomnqweno ovuthayo njengoko kuchazwe ngezantsi.
Waqala umsebenzi wakhe eYurophu njengengcali yolutsha eBolton Wanderers emva kokubonakala nguChris Sulley. U-Aaron Mooy wayenqwenela ukwandiswa kwemvumelwano evela eBolton ngoJulayi 2010 ekukhangela ibhola lebhola lokuqala. Kamva wajoyina YaseScottish Premier League club St Mirren 23 Oktobha 2010. Ngokukrakra, uMooy kamva wathengisa iNgilani yaseScotland ngaphambi kokuba abuyele ekhaya e-2012 ukuze ajoyine iWest Sydney Wanderers kwi-A-League.
Kwi-2016, wabuyiselwa eNgilani ukuze adlale e-Manchester City. Apho, waqhubeka ebolekwe ngemali-mboleko ukuya eHustard Field Town. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Aaron Mooy Iindaba zebantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
UAaron Mooy wadibana nothando lobomi bakhe, uNicola ngo-2011 ngexesha lakhe kunye neqela laseScotish uSt Mirren FC uAron noNicola khulile kunye uthando kunye nokuvisisana. Bajonga ubudlelwane babo njengento engunaphakade.
Njengomnye umzali omtsha, ubomi buka-Aaron Mooy bujika xa wazalwa umntwana wakhe wokuqala. Inkwenkwezi yaseAustralia yayinezizathu ezininzi kunezona ezininzi kwixesha lokucinga. Sikuxelela ukuba kutheni ...
Ngamazwi akhe... "Ngoku ukuba ndikhulile (Skylar) Ndiyayiqonda indlela endithanda ngayo umntwana wam. Kuhlekisiwe. Ukuze angabi ufuna ukundibona, nje ngobawo. Enyanisweni, andiyiqondi. Ndivuyayo ngoku. Kudala, andifuni ukucinga ngako. Ndandisoloko ndicinga ngebhola kwaye ukuba ndibenomdla omubi ndicinga ngawo ngeentsuku. Ngoku ndinomntwana kwaye kuthatha ingqondo yam, " UAron Mooy uthe.
I-Western Sydney Wanderers kunye neNelbourne City yokuqala yahlangana noNicola ngo-2011 kwaye yavuya kakhulu xa ibophe iqhosha. "Ekugqibeleni wam ngumfazi! Ngumhla omangalisayo, " Wabhala nge Instagram.
I-Aaron Mooy Iindaba zebantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Nangona intsapho yakhe yayinomdla, uMoyoy wakhula kwikhaya elinothando, kunye nomama wakhe onenkalipho enika umlenze kunye nomntu onyamekelayo, u-Alan Todd u-Aaron amthanda kakhulu. Uyise ka-Aroni wazalelwa eJamani. Ngesinye isikhathi, uAron wagqiba ekubeni adibane noyise wangempela xa wayefuna ukuba asayine kwikholomu yakhe eyayingayifumana ipaspoti yeDutch.
Njengoko uAron ubeka; "Ndidibana naye kamva ukuba amtyikitye ifom yepasipoti yam yaseDashi, eyona yodwa ixesha," UMooy uthe ...."Kwakusele nje ngaphambi kokuba ndihambe eNgilani, ngoko ke mhlawumbi ndiyi14. Kwakufutshane. "
Xa wadibana noMzalwana wakhe: Emva kokuba esesezikhungweni zentengiso kunye namakhwenkwe aseNtshona Western Wanderers kwaye le nyana yaya kuye yathi, 'Ndiyindoda yaseKuhlman, sinomnye ofanayo kwaye umama wam ufumene iifoto zakho njengomntwana'. UAron Mooy uthe ..."Ndatshwenyeka, ndilahlekelwe ngamazwi, ndonwabile. Ndayazi ukuba wayenabantwana kodwa andingazi ukuba zininzi okanye ubudala. Andicingi ukuba ndiza kuthetha naye. Nangona njengengane endiyifuniyo ukuba ndiyiqonde, ndandisoloko ndididekile, bekude kakhulu ngaphandle kokuba abe noqhagamshelwano. Enyanisweni, iinkumbulo zam zokuqala zidlala ibhola yeCarlingford Redbacks kunye nomntwana ohamba naye njengomqeqeshi. ''
I-Aaron Mooy Iindaba zebantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iimpawu zeTattoo
U-Aaron Mooy unalo uphawu olulandelayo ngobuntu bakhe.
Amandla ka-Aaron Mooy: Unyanisekile (ubudlelwane kunye nobuchule bokusebenza), ukuhlalutya, ububele, ukusebenza nzima kancinci.
Ubuthathaka buka-Aaron Mooy: Uyakhathazeka kakhulu kwaye angasebenza yonke imini ngaphandle komdlalo.
Yintoni uAron Mooy ayithandayo: Ukuhambisa iinwele zakhe, izilwanyana, ukudla okunempilo, iincwadi, uhlobo kunye nococeko
Oko u-Aaron Mooy akuthandiyo: Ukunyaniseka, ukucela uncedo, ukuthatha ibakala eliphambili.
Isishwankathelo, uAron ngumntu onokuhlala ephulaphula iinkcukacha ezincinci kunye nolwazi olunzulu lwabantu olwenza ukuba alumke kakhulu kwizenzo zokuphila.
UMooy ungumveli waseDatshi, kwaye ehlombe lakhe lasekhohlo, unamazwi "Leven, Lachen, Liefde" tattoo, eguqulela "Phila thanda hleka". Unina, uSam, unamagama afanayo kwisandla sakhe.
I-Aaron Mooy Iindaba zebantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Waya esikolweni esiphakamileyo esifana noHarry Kewell
I-Westfield Sports High, eyaziwayo njenge-Fairfield Factory Factory, idume ngokuvelisa iinkwenkwezi zezemidlalo ezinamandla kakhulu e-Australia. UKewell wayegqwesa isikolo esiphakamileyo kwaye ngoko uMooy.
I-Aaron Mooy Iindaba zebantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ingoma kuMhloniphe
Intloko ehamba phambili kaMooy iyisihloko sezingoma zeDolophu yaseHurdersfield. Ukuhlabelela kwingoma ye-Boney M ye-1978 hit It iya njenga .."Hooray! Hooray! Iholide yeHoli! ", ingoma iya, "UAaron Mooy, uAron Mooy. UAron, uAron Mooy. Akunaso iwele, kodwa asikhathaleli. UAaron, uAron Mooy. "
I-Aaron Mooy Iindaba zebantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Helped Huddersfield Idolophu kwi-EPL ngokokuqala ngqa ukususela kwi-1972
I-Huddersfield Idolophu ayilindeleke ukuba ifumane ukukhuthazwa kwiNkulumbuso League ngeli xesha, kodwa ngoMooy echitha umlingo wakhe emkhatsini, iqela libuyele kwi-flight phezulu okokuqala kwi-45 iminyaka. Ngendlela, uMooy wafaka iinjongo ezine, kubandakanywa isohlwayo esibalulekileyo ekuchaseni ukufunda kumdlalo wokugqibela wexesha le-2016-17.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda iAron Mooy Ibali leBantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.
Incwadi yebhola yaseAustralia
Huddersfield Idolophu yeDlalo yebhola
Umhla oLungisiweyo: nge-30 kaSeptemba ngo-2019